गोर्खाली बाबु - ghale-rajs jimdo page!
अशिम सम्झनाका स्नेहहरु
अशिम सम्झनाका स्नेहहरु तिमी म बाट भौतिक रुपमा टाढा भएकी छौ। तर पनि तिम्रो माया यो मुटुमा अंमिर छप भनेर रहेको छ। र मलाई विश्वाश छ। म बाट, म बाट टाढा भए पनि तिम्रो मनमा म प्रतीको स्नेह, प्रेम र चोखो माया सधैं जिबित रहीरहने छ। रहेको छ।
मान्छे भौतिक रुपमा टाढा भए पनि माया, सम्झना र हिर्दय भित्रको प्रेम भने सधैं ताजा अनी अमर बनी राखेको छ। मैले तिमीलाई विश्वाश गरेको छु, तिमीले मलाई विश्वाश गरेकी छौ। र यही विश्वाशमा नै सम्बन्ध टिकेको हुन्छ, सम्बन्ध अटेको हुन्छ। जुन दिन तिमी कामको सिल सिलामा टाढा गयौ। त्यो पल त्यो बिदईको क्षण हामी दुबै कत्ती रुएको थियौ है? दुबैको आँखाबाट अनब्रतमा आशुहरु बही रहेक थिए भन्न खोजी रहेक थिए तर बोल्न सकी रहेक थिएनौ हामी.. बस, ...हाम्रो आँखाहरुले मायाको भब प्रकट गरी राखेको थियौ। र एक अर्कप्रतिको विश्वाशलाई जल्कै राखेको थियौ।
कही..... मनमा डरलग्ने गर्छ, अतलिने गर्छु। कही कतै भौतिक रुपमा भएको यो दुरी यो टाढापन कही कतै पछी गएर अर्को रुप त लिने होइन?
म बाट सदको निम्ती टाढा बाइदिने त होइन? भन्छन समय र परिस्थितीको अगाडि कसैको केही चल्दैन रे। भाग्यमा जे लेखेको छ मान्छेले त्यही भोक्नु पर्छ रे। त्यसैले मलाई डरलग्ने गर्छ,कही कतै मेरो भाग्यमा तिमी नलेखे है अथवा समयको परिस्थितीले हामीलाई सधैंको निम्ती बिछोड गराइदिए म कसरी बाचौल? सम्जन्द पनि कहली लाग्छ।
तर पनि,,,,,तर पनि विश्वाशत हुने गर्छु म किन कि हाम्रो प्रेम साचो छ स्नेक्त छ यिनै प्रेमले अबस्य पनि अमरताको रुप लिने छ। अनी आफ्नो काम, आफ्नो लक्ष्या पुरा गरी सके पछी जीवनको मिठो सपनालाई हामी पुरा गर्ने छौ। दुबै एक हुने छौ। जीवनमा अई परेका हरेक आफ्ठेरा परिस्थितीहरु सँग दुबै मिलेर त्यस्को समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने छौ।
तिमी प्रतिको यो मेरो विश्वाश हो चोखो स्नेह हो र तिम्रो विश्वाशलाई यो मिठो मायालाई तिमीले सधैं जोकई राख्ने छन भन्ने मलाई विश्वाश लगेको छ। अन्तमा घर कहिले आउ? फर्किन्द तिमीलाई के लिएर आउ म ? बस तिमी पनि म कहिले फर्कान्छा होला भनी मेरो प्रतिक्षामा मात्र होल हिजो आज मेरो पनि दिनहरु यसै गरी बिताइ रहेको छु यहाँ।
पोजिटिभ थिकिङ् अर्थात् सकारात्मक सोच व्यक्तिको जीवनको हरेक मोडमा आवश्यक हुन्छ । यसबाट सफलताको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । आठ अक्षरबाट बनेको 'पोजिटिभ' शब्दका हरेक अक्षरले आफ्नै हिसाबले सकारात्मक सन्देश दिन्छन् ।
S-सेटिस्फेक्सन अर्थात् सन्तुष्टि ः जुन बेला आफ्नो मनमा सन्तोषको भाव जन्माइन्छ अनि तपाईं सकारात्मक सोच बनाइन्छ र अनावश्यक तनावबाट जोगिइन्छ । जे-जति प्राप्त भएको छ र जसरी प्राप्त भएको छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ, सन्तोष मान्नुपर्छ। 'सन्तोषम् परमं सुखम्' भनेझैं प्राप्तिबाट सन्तुष्ट भै सुखको अनुभव गर्नुपर्छ । यद्यपि सन्तोष त्यो प्राप्तिका लागि हो, अघि बढ्नु अझ आवश्यक छ भन्ने सोचलाई पनि जीवित राख्नुपर्छ । मनोचिकित्सकहरूका अनुसार अवसादको स्थितिबाट जोगिने एक मात्र उपाय सन्तोष हो ।
I-आइडल अर्थात् आदर्श आफ्नो व्यक्तित्वलाई यसरी निखार्नुपर्छ कि अरूका लागि त्यो एक आदर्श बनोस्। कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो मानसिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । हरेक स्थितिमा खुसी रहने, अरूको सुख-दुःखमा सहयोगका लागि तत्पर रहन हो भने आफू कोही आदर्श व्यक्तिभन्दा कम भइँदैन । हामी आफ्ना गुरु, आमाबुवालाई आदर्श किन मान्छौं ? पक्कै उनीहरूमा आफूलाई प्रभावित गर्ने गुण र विशेषता छ । यस्तो हो भने आफू पनि अरूका लागि आदर्श बन्ने प्रयास किन नगर्ने ?
P-Patience -पेटिएन्स अर्थात् धैर्य
O-Optimistic -अप्टिमिस्टिक अर्थात् आशावादी
S-Satisfaction -सेटिस्फेक्सन अर्थात् सन्तुष्टि
I-Inspiration -इन्स्िपरेसन अर्थात् प्रेरणा
T-Target -टार्गेट अर्थात् लक्ष्य
I-Idol -आइडल अर्थात् आदर्श
V-Victor -भिक्टर अर्थात् विजेता
E-Easy -इजी अर्थात् सहज